အိမ်တွင်းအောင်းပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ် – Live the Dream
အခုဆိုရင် Covid-19 ကြောင့်ဖြစ်စေ ရာသီဥတုပူပြင်းလွန်းလို့ ပဲ ဖြစ်စေ လူတော်တော်များများလည်း အိမ်ပြင်ကိုတော်ရုံထွက်ဖြစ်ကြတော့မှာ မဟုတ်ဖူးလို့ မင်မင်တော့ထင်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ အိမ်မှာပဲနားနေချင်ပေမဲ့လည်း မဖြစ်မနေရုံးတက်နေရသူတွေ အလုပ်လုပ်နေရသူတွေလည်း ရှိနေမှာပါတယ်။ မင်မင်အနေနဲ့ ကတော့ တခြားအကြံပေးနိုင်တာမရှိပေမဲ့လည်း အပြင်ထွက်ရပြီဆိုရင်တော့ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုလည်း ဂရုစိုက်ပြီးကာကွယ်ကြသလို ရာသီဥတုကလည်း အပူုပြင်းလွန်းတာမို့ နေကာတွေ ထီးတွေ မမေ့ဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ဂရုစိုက်ကာကွယ်ကြဖို့ တော့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
အခုဆိုရင် သတင်းတွေမှာလည်း ကြားရတွေ့ ရတဲ့ သတင်းတွေကမကောင်းတဲ့သတင်းတွေပဲ များနေတာမို့ တစ်နေ့ နဲ့ တစ်နေ့ မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ မှာစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေလည်းများလှပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ညစ်စရာတွေများတဲ့ချိန်မှာ အိမ်မှာနေရင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရယ်မောလို့ ရမဲ့ဟာသရုပ်ရှင်တစ်ချို့ ကို Live the Dream ပရိသတ်တွေဆီ ညွန်းပေးချင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်သုံးသပ်သူတွေလို သုံးသပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုရုပ်ရှင်တွေညွန်းပေးသလို ပဲ သတ်မှတ်ပေးပါနော်။ မင်မင် အခု ညွန်းပေးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေအားလုံးကို Channel Myanmar ရဲ့ website မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ ရပါတယ်။ မင်မင်ညွန်းထားတဲ့အထဲမှာ ဘယ်ကားကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်း ကြည့်ပြီးသားတဲ့သူတွေက ဝင်မန့်ပေးသွားပါဦးနော်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကြည့်ဖူးတဲ့ဟာသကားတွေထဲက အကြိုက်ဆုံးဇာတ်လမ်းကိုလည်း share ပေးသွားလို့ ရပါတယ်။
Pitch Perfect မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ကြားဖူးနေကြ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေကို တူရိယာတွေမပါဘဲ Acapella လို့ ခေါ်တဲ့ မတူညီတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ နားဆင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေကလည်း အရမ်းကိုကောင်းလွန်းလို့ မင်မင်ဆို ကြက်သီးတောင်ထပါတယ်။ ဂီတကို ရူးသွပ်ပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့ဂီတနဲ့ ပတ်သက်လို့ အိပ်မက်တွေအကြီးကြီး မက်ထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်ခဲ့ကြတယ်။ အရှက်တွေလည်းကွဲခဲ့ကြတယ်။ အနှိမ်တွေလည်းခံခဲ့ကြရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းကြားမှာလည်း နားလည်မှုလွဲခဲ့ရတာတွေ နဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကျခဲ့ ရတဲ့ အချိန်တွေလည်း မနည်းပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေတွေ ကြားထဲမှာ သူတို့ ကြိုးစားခဲ့တာတွေက အရာထင်ခဲ့ရဲ့ လား ဆိုတာကတော့ ရုပ်ရှင်မှာအဖြေရှာကြည့်လိုက်ပါ။ Pitch Perfect ကတော့ 1,2,3 ဆိုပြီးတော့ ၃ကားရှိပြီးတော့ တစ်ကားကိုပုံစံတစ်မျိုးစီမြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး နံပတ်၃မှာတော့ action ဆန်ဆန်ဇာတ်ကွက်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
2.We’re the Millers
ဇာတ်လမ်းအစကနေ အဆုံးထိအူလှိမ့်အောင်ရယ်နေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ We’re the Millers ကို ညွန်းပေးချင်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးရောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ မက်ဆီကိုနိုင်ငံမှာ ဆေးအရောင်းအဝယ်လုပ်ဖို့ အတွက် သွားဖို့ လည်း ရှိတယ်။ ရဲဖမ်းခံရမှာလည်း ကြောက်တဲ့အတွက် သူရဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေကိုအကူအညီတောင်းပြီး မိသားစုဟန်ဆောင်ပြီး မက်ဆီကန်နိုင်ငံကို သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လမ်းမှာစစ်ဆေးခံရတာတွေလည်း ရှိသလို ဆေးထုပ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ သူတို့ ရဲ့ ကားဟာ ရဲတွေရဲ့ လက်ထဲရောက်ဖို့ လက်မတင်လေးပဲ လွတ်သွားတဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ရှိခဲ့သလို အလွဲပေါင်းများစွာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရဲလက်ကနေရော ဘယ်လိုလွတ်ခဲ့လဲ ဘယ်လိုအလွဲတွေနဲ့ ဟာသတွေဖောက်မလဲဆိုတာကိုတော့ ရုပ်ရှင်မှာဆက်ပြီး ကြည့်ပေးပါနော်။
စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်း ကောင်းမယ်၊ ဟာသပါတာလေးလည်း ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ Murder Mystery ကို ကြည့်ဖို့ ညွန်းပေးလိုပါတယ်။ Hollywood ရဲ့ ခန့် စည်သူ လို့ ပြောကြတဲ့ မင်းသား Adam Sandler နဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသမီး Jennifer Anniston တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ရဲဝန်ထမ်းဟောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့ အမျိူးသမီးဖြစ်သူနဲ့ အတူ Anniversary အထိမ်းအမှတ် အပန်းဖြေခရီးထွက်ဖို့ ဥရောပ ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးဖြစ်သူဟာ သူတို့ ခရီးထွက်လာတဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ ဆုံမိပြီး စကားစမြည်ပြောဖြစ်ရာကနေ သူတို့လင်မယားကို ညစာအတူစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ညစာအတူစားကြရင်း နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာတော့ လူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဲဒီလူသတ်မှုအတွက် ရဲဝန်ထမ်းဟောင်းတို့ လင်မယားဟာ သံသယရှိသူအဖြစ် စစ်ဆေးခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလူသတ်မှုကို သူတို့ တကယ်ပဲ ကျူးလွန်ခဲ့သလား? ဇာတ်လမ်း မှာတော့ လှည့်ကွက်တွေလည်းအများကြီးပါသလို ဟာသတွေနဲ့ မပျင်းရတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲ။
ဒီတစ်ခါတော့ နည်းနည်းလောက်ရိုကြည့်ရအောင်နော်။ Marcus နဲ့ Sasha တို့ ဟာ ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်ချင်းကပ်နေကြတဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေပါ။ သူငယ်ချင်းတွေကနေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်သံယောဇဉ်တွေကြောင့် ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Sasha တို့ မိသားစုဟာ တခြားမြို့ ကို ပြောင်းရွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ နှစ်တွေအများကြီးကြာပြီး အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ငယ်ချစ်နှစ်ယောက်ဟာ ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ အရင်လိုတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မြို့ ကြီးပြကြီးရောက်သွားတဲ့ Sasha တစ်ယောက်ဟာ နာမည်ကြီးတဲ့ စားဖိုမှုးတစ်ယောက် ဖြစ်သွားပေမဲ့ Marcus ကတော့ အရင်လိုပဲ အဖေဖြစ်သူနဲ့ အတူနေရင်းဘဝကိုရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်သန်းနေခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဟောင်းနှစ်ယောက် ပြန်ဆုံကြ တဲ့အခါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆နှစ်နဲ့ ဘာတွေကွာခြားသွားကြပြီလဲ? ဘာတွေကရော မပြောင်းလဲပဲ အရင်တိုင်းရှိနေအုန်းမလဲ? ဒီရုပ်ရှင်လေးကို ကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ ကိုယ်ရဲ့ ငယ်ငယ်က ငယ်ချစ်ဦးတွေကိုလည်း သတိရမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။